Ecaleni kolwandle, kufutshane neSikhululo seenqwelomoya - I-Airbnb
Ecaleni kolwandle, kufutshane neSikhululo seenqwelomoya
Igumbi lakho lokulala e indlu esemaphandleni sinombuki zindwendwe onguNiki
Isitudiyo esiphindwe kathathu, esinegumbi laso lokuhlambela kunye nekhitshi ... ngokwendalo, idibanisa intaba kunye nolwandle. Ukufikelela kwindawo yokuhlala uwela i-500 yeemitha zendlela yomhlaba. (Ngamanye amaxesha siye sibambe izinja ezilahlekileyo esizinika ukuba zikhuliswe). Siyazamkela izilwanyana zasekhaya, (izinja zethu zikwindawo yazo enganxibelelani nendlu yonke). Siziikhilomitha ezingama-24 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kunye neekhilomitha ezingama-20 ukusuka kwizibuko laseLavrio. Singakunceda uququzelele uhambo lwakho.
Ekhanyayo, enomoya, kwindalo, idibanisa intaba kunye nolwandle. Sinomntwana ngoko sinebhedi kunye nestroller. Sinegadi kunye neflethi kunye nezinja zethu. Samkela izilwanyana zasekhaya, ngaphakathi endlwini nangaphandle (izinja zethu zikwindawo yazo enganxibelelani nendlu yonke). Indawo ilungele ukuhamba (kwihlathi lepine), kunye nolwandle olusondeleyo lokubhukuda, ukutya, ikofu, isiselo kwi-1,800 yeemitha ukusuka kwindlu. Sifumaneka kwizibuko laseLavrio, kwiikhilomitha ezingama-20, indawo yokutyelela (kunye nemyuziyam), indawo efanelekileyo yokutya (kunye neentlanzi ezintsha kunye nezilwanyana zaselwandle), i-ayisikrimu, iziselo njl, kodwa kunye nechweba apho umntu unokudibanisa khona. kutyelela kwiziqithi ezikufuphi ngeenqanawa ezifana Kythnos kunye Kea (malunga nama-1.5 iiyure ngeenqanawa).
Sikwindalo, kwinduli eluhlaza enepayini. Udinga imoto eqashisayo. Iilwandle ezikufutshane ne-5, i-3 ihlelwe nge-cafe - ibha, ukutya, i-sunbeds kunye ne-ambrela. Elona likufutshane, "KAKI THALASSA" likwi-2 km kwaye enye ijikeleze i-4 km eDASKALIO). Imarike encinci ikufutshane kwi-1800 yeemitha. Imarike ekufutshane, ivenkile enkulu, ikhemesti njl.njl kwi-6 km kumbindi weKeratea. ILavrio ikumgama oziikhilomitha ezili-18, yi-PORT ukusuka apho iiferi zihamba khona ukuya kwiziqithi zaseCycladic Kea, Kythnos, Syros. Isikhululo seenqwelomoya saseAthene El. IVenizelos, imi malunga neekhilomitha ezingama-20. Kwipaki yokuthenga kufuphi nesikhululo seenqwelomoya kukho iFactory Outlet - Airport, IKEA njl.
Siyafumaneka kwisiza ngayo nantoni na oyifunayo. Siphinde sitshintshe ukusuka / ukuya kwisikhululo seenqwelomoya, isikhululo semetro saseKoropi (iSikhululo saseKoropi Suburban), izibuko laseLavrio ngentlawulo eyongezelelweyo. Kuba nabani na onqwenelayo sinokulungiselela ukukhwela isikhephe kwaye siqubhe kwiilwandle ezifihlakeleyo (abantu abayi-1-3), ngeendleko ezongezelelweyo. Kwakhona sinokumkhapha xa sibona iindawo, nakuyo nayiphi na enye into efunekayo, ukulungelelanisa imihla yakhe eAthene.
Siyafumaneka kwisiza ngayo nantoni na oyifunayo. Siphinde sitshintshe ukusuka / ukuya kwisikhululo seenqwelomoya, isikhululo semetro saseKoropi (iSikhululo saseKoropi Suburban), iz…
Inombolo yomthetho: 00000334995
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dionysos Keratea Attica